राप्रपा महाधिबेशनमा कति खर्च होला ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अर्थनीति > राप्रपा महाधिबेशनमा कति खर्च होला ?
राप्रपा महाधिबेशनमा कति खर्च होला ?
काठमाडौ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आसन्न महाधिवेशनमा करिब रु एक करोड ५० लाख खर्च गर्ने भएको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलाई खान, बस्न तथा महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारका लागि सो रकम खर्च गर्न लागिएको हो ।
सो रकम पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । पार्टीले यही फागुन ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुन लागेको महाधिवेशनमा यसपटक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
पार्टीले सहरको सौन्दर्य कायम राख्न भित्तेलेखन नगर्ने र सामाजिक सञ्जालको, यूटुब प्रयोग गर्ने तथा पर्चा पम्लेट वितरण गर्नेछ । महाधिवेशनमा महिला, दलित र सीमान्तकृतलगायतको समावेसी प्रतिनिधित्व गराइनेछ । महाधिवेशनका गतिविधिका बारेमा सूचना कक्ष स्थापना गरिने र उद्घाटन सत्र विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिनेछ ।
महाधिवेशन मूल आयोजक समितिअन्तर्गत प्रचारप्रसार विभागका संयोजक एवम् महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले महाधिवेशनका लागि तयारी कार्य तथा मञ्च व्यवस्थापनका कार्य सुरु भइरहेको जानकारी दिँदै महाधिवेशनमा हुने चुनावका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिने बताए ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा महाधिवेशन केन्द्रित गरिनेछ । एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुबै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिन चुनौती देखिएको थियो ।
पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले आसन्न महाधिवेशनमा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै नेपालस्थित कुटनीतिक प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने बताउँदै उदघाटन सत्रमा करिब एक लाखको सहभागिता हुने जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन ४
२०७३ फागुुण ४ गते १५:५२ मा प्रकाशित
जापानद्वारा चार अर्ब ५३ करोड अनुदान सहयोग
द्वन्द्वकालीन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य बन्न ६१ जना इच्छुक (नामसहित)
तयारी रहनुस, लघुवित्तको २ करोड ४० लाख रुपैंया वरावरको साधारण शेयर निष्काशन हुँदै
इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिँदैछ बोनस, बुक क्लोज गर्ने मिति तय
महिला उद्यमीलाई सनराइज बैंकले १५ लाखसम्म कर्जा दिने, ब्याजदरमा कति छुट ?
धादिङका व्यवसायी अधिकारी एफएनसीसीआई आर्थिक विकास समितिको उपसभापतिमा नियुक्त